မော်ကွန်းထလော့ — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
တက် တက် တက် တက် တက် တက် တက် တက် တက် တက် တက် တက် တက် တက်
ငါကိုအလွန်လေးစားတော်မူသောအသက်ကြီးသောသူနှင့်အတူစကားပြောခဲ့, ငါ၏အလူနေမှုပုံစံစတဲ့နှငျ့ဘုရားသခငျဂုဏျတငျအဘို့အကြှနျုပျ၏ဂိမ်းအစီအစဉ်ကိုရှင်းပြဖို့စိတ်လှုပ်ရှား, အထူးသညျငါ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသန့်ရှင်းစင်ကြယ်. ငါကအကြောင်းအေးဆေးဖြစ်ဖို့ကြိုးစား, ဒါပေမယ့်၌ငါ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကျင်းပရန်အမြဲခက်ခဲခဲ့ပါတယ်. ထိုစကားရွံရှာဘွယ်သောရောနှောအရှိန်အဟုန်မှာငါ့လျှာမှဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဖြစ်, ငါကသူငါဖြစ်သကဲ့သို့အဖြစ်စိတ်လှုပ်ရှားမဟုတ်ခဲ့သောသဘောရတယ်. သူကရန်ကြိုးစားနေခဲ့သည်…
တွင် 2012, ငါ "ကိုပယ်ဂီတကနေနင်း။ " ဖြစ်င့်ကြောင်းကြေညာခဲ့သည်ဟုတ်ကဲ့, ငါအငြိမ်းစား-ish အသံသိ, ငါမူကားရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိကြောင်းစကားလုံးကိုမသုံးခဲ့ပါ. ငါမကြောင့်ငါရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိမရေကြောင့်ထားရှိမည် 100% အဘယ်အရာကိုပြုလုပ်လိုတာသေချာပါ…